नेकपा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको माग !
माघ १७, २०७६
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको तेस्रो दिन आफ्नो समूहबाट प्रस्तुति दिँदै लेखनाथ न्यौपानेले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भ्रस्टाचारबाट देश आक्रान्त बनेको र भ्रष्टाचार नेताबाटै भएको निष्कर्षका साथ सम्पत्तिको पूर्ण छानबिन हुनुपर्ने माग न्यौपानेले गरेका हुन् ।
'भ्रष्टाचार भएको छ पनि भन्ने तर त्यो सम्पत्ति कहाँ छ भनेर नभन्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्षसहित हामीले नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्‍यौं,' न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने ।
यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने र नेताहरूले राख्न पाउने सम्पत्तिको सिलिङ तोक्नुपर्ने माग न्यौपाने नेता रहेको समूह नम्बर १३ को तर्फबाट पेश भएको हो ।
त्यस्तै शीर्ष नेताबीच नै गुट उपगुट चलाउने प्रतिस्पर्धा भएको र यसलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न पार्टीसम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूको खारेजी गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी सदस्य राजेन्द्र राईले गुट-उपगुट मौलाउन प्रतिष्ठानहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष आफ्नो समूहको रहेको बताए ।
समूह ११ को नेता समेत रहेका राईले पार्टीमा गुट छ भनेर शीर्ष नेताहरूले नै स्वीकार्ने गरेको तर कसको गुट छ भन्ने प्रश्नमा नेताहरू चुप रहने गरेको बताए ।
'पार्टी गुटबन्दीको अखडा भयो,' राईले लोकान्तरसँग भने, 'गुटबन्दीका सबै कारक तत्वहरू नष्ट गर्नुपर्र्छ । त्यसका लागि नेताहरूको नामबाट खोलिएका प्रतिष्ठानहरू बन्द गर्नुपर्छ ।'
शुक्रवार सातवटै प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष सँगसँगै सम्पर्क समन्वय समिति, उपत्यका विशेष समिति र प्रवास कमिटीबाट प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।
त्यससँगै ४ वटा समूहहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । समूह १३ बाट लेखनाथ न्यौपाने, ९ बाट भगवती चौधरी, ६ बाट दिनानाथ शर्मा र २ बाट कमला रोकाले समूहगत प्रस्तुति दिए ।
समूहगत प्रस्तुतिमा सबै समूहबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)का बारेमा प्रस्तुति आएको केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा 'दीपशिखा'ले बताए ।
'एमसीसीका बारेमा धेरै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले बुझेको पाइएन, तर यसको विरोध र समर्थन भने सबैले गरेका छन्,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'यसका लागि एउटा कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने मोटामोटी निष्कर्ष आएको छ ।'
नेता राम कार्कीले विगतबाट उपलब्धि मात्र लिने तर त्यसको दायीत्व नलिने प्रवृत्ति देखाउन नहुने बताएका छन् ।
१४ नम्बर समूहको टोलीनेतासमेत रहेका कार्कीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगतले प्रत्येक कुरामा शंका गर्न सिकाएको बताए ।
'एमसीसीका बारेमा बहस हुनु सकारात्मक हो,' उनले भने, 'यो प्रत्येक जनताले बहस गर्न पाउनुपर्ने विषय हो । यससँग जोडिएका प्रत्येक सवालहरूको जवाफ खोज्नुपर्छ ।'
कार्कीले विश्वमा 'डाटा कोलोनाइजेसन'को अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
शनिवार बिहान ११ बजेबाट शुरू हुने अर्को बैठकमा बाँकी रहेका समूहहरूले समूहगत प्रस्तुति दिनेछन् ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले १५ वटा समूह बनाएर सामूहिक छलफल गरेका थिए ।
बिहीवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, पेरिसडाँडा र राष्ट्रिय सभागृहमा छुट्टाछुट्टै समूहको छलफल चलेको थियो ।
तीनवटै दस्तावेजमाथि धेरैजसो समूहको छलफल बिहीवारै सम्पन्न भएको भएपनि एकाध समूहले शुक्रवार बिहान पनि छलफल गरेका थिए ।
समूह १ मा उर्मिला अर्याल र आनन्द पोखरेल टोली नेता छन् भने समूह २ मा कमला रोका छिन् ।
३ नम्बर समूहमा खिमलाल भट्टराई, ४ नम्बरमा जगन्नाथ खतिवडा, ५ नम्बरमा ठाकुर गैरे, ६ नम्बरमा दिनानाथ शर्मा, ७ नम्बरमा पूर्णकुमारी सुवेदी, ८ नम्बरमा बिन्दा पाण्डे, ९ नम्बरमा भगवती चौधरी, १० नम्बरमा कोही चुनिएको छैन, ११ नम्बरमा राजेन्द्र राई, १२ नम्बरमा रेणु दाहाल, १३ नम्बरमा लेखनाथ न्यौपाने, १४ नम्बरमा राम कार्की र १५ नम्बरमा हिमाल शर्मा टोली नेता चुनिएका छन् ।
नेकपा नेतृत्वलाई सुझाव- सहमतिबाट समाधान खोजियोस्
सरकारलाई जनताको भन्दा बढी माया कुर्चीको छ : कांग्र...
हिजो दिनभर : सडक प्रदर्शन रोक्न नेतृत्वसँग नेकपा नेताहरूको माग, गुम्यो सरिता गिरीको सांसद पद
कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने क्रम कर्णालीमा घट्दो
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका ४ वटा बिओपी स्थापना
पहिरोले पोखराको छोरेपाटनमा ३ जना घाइते
म्याग्दीमा पहिरोले घर बगाउँदा ७ जना बेपत्ता
एसईईको नतिजा नआउँदै कक्षा ११ को भर्ना !
लमजुङमा पहिरोमा एकैघरका ३ जनाको मृत्यु
किस्ता भुक्तानीको समय थपिन्छ : गभर्नर